Weather in Bali in September ~ Journey-Assist. Fety tany Bali amin'ny volana septambra
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Toetr'andro sy Bali » Weather in Bali amin'ny volana septambra
Weather in Bali amin'ny volana septambra
Septambra ho tsara miala voly eto. Araka ny tatitra dia ny fiandohan'ny fararano no vanim-potoana fialan-tsasatra malaza indrindra any Bali. Tamin'ity volana ity, mitohy ny andro maina, main-tany mafana, mafana (mari-pana ny + temperatura) +31 fa tsy feno. Ny hariva indraindray dia somary mangatsiaka. Tsy fahita firy ny orana, matetika amin'ny alina. Tena mafana ny rano an-dranomasina. Fotoana mety hiserana io.
Amin'ny volana septambra, ny mari-pana amin'ny andro dia 31 ° Celsius Amin'ny alina, mihena ny mari-pana amin'ny 23 ° Celsius.
Manaka hatrany amin'ny 27 ° Celsius ny rano any amin'ny ranomasina any amin'ny volana septambra. Ny fialantsasatra amoron-dranomasina amin'ny volana septambra dia mahasalama araka izay azo atao. Ny tsy fisian ny hafanana isan'andro sy ny hamandoana avo dia ahafahanao mandany andro manontolo amin'ny tora-pasika. Tsy misy ny rivotra mahery, satria tsy misy onja mahery, ka mandritra io vanim-potoana io dia misy fizahan-tany be dia be miaraka amin'ny ankizy eny amoron-dranomasina.
Fanetren-tena any Bali tamin'ny volana septambra
Ny fanetren-tena tamin'ny volana septambra dia somary avo kokoa noho ny tamin'ny fahavaratra ary mihena 65 isan-jato. Ny zavona kely dia tonga amin'ny toerana avo amin'ny maraina. Amin'ny ankapobeny, ny toe-javatra dia mety amin'ny fampiakarana ny tampon'ny tendrombohitra Bali.
Varatra any Bali ny volana septambra
Ny orana amin'ny volana septambra any Bali dia tsy fahita firy. Mitovitovy amin'ny alina izy ireo ary maharitra mihoatra ny adiny roa. Raha ny salanisa, mandritra ny volana dia tsy mihoatra ny 8 andro matevina.
Surfing amin'ny Mey
Tsara tady ny Surfing any Bali amin'ny volana septambra. Mandeha ny toeram-patana. Ny ranomasina no tsy mahaliana.